Umhambisi we-Omron Umsasazi wezinto ze-elektroniki ze-Omron-Ocean-Components.com
- U-Omron ungomnye wabathengisi abahamba phambili bezolawulo eziphezulu, ezinokuthenjwa ngekhompyutha kunye neenkqubo. Ungakwazi ukubala ukuba sikunike ubuchwepheshe bwakutshanje kwaye sikunikeze ngomgangatho ophezulu kunye nokusebenza kuyo yonke indawo yomveliso esiyithatha inxaxheba kuyo. Ukususela ekulayeleni kwimpompo yombono ophambili, akukho mntu unikeza intsebenzo engcono kune-Omron. Sinikezela ngeenkonzo zehlabathi jikelele kunye nenkxaso yokuthengisa evela kumaofisi angama-1,500 ehlabathini lonke. Nomaphi apho, okanye naphi apho umthengi wakho, u-Omron ukhona ukunceda.
U-Omron ngumthengisi ohamba phambili wehlabathi. Sinikela ngeentlobo ezahlukeneyo kunye nobuchwephesha obuphambili kwezobuchwepheshe malunga naluphi na ukufunwa kwempahla. Khetha ukusuka kumqondiso ophantsi, injongo epheleleyo, i-PCB yamandla, isimo esomeleleyo nesimo se-MOS. Utshintshi olusisiseko kunye nolunobumba lusebenza ngokubambisana kunye nokuthunyelwa kwethu kubasebenzisi beekhompyutha, izixhobo zokusebenza, iipompiyutha, iimveliso ze-automation kunye nezicelo ze-telecom. Khetha kwi-basic, tactile, DIP, switches optical kunye ne-photomicrosensors.
Izixhobo zengqondo - Ukubonakalisa - Isiphumo seLo
Iimpawu zokuqonda - Ukulinganisa ubude
I-Connectors e-Rectangular - IiNtloko, i-Pinned Sp
AmaFayili - Izixhobo - Iintambo Zentsha
Abafaki - Abalindi beMinwe, Abahlalutyi & amp; Imi
I-Magnetic Strip, Abafundi beKhadi le-Smart Card
Inkcazo: MAG CARD RDR SWIPE TRK1/2
Inkcazo: CONNECTOR 64POS RA TERM DIN
Ikhona evenkileni: 24614 pcs
Inkcazo: SENSOR CONVERGENT REFLECTIVE
Ikhona evenkileni: 25348 pcs
Inkcazo: CONTACT PROBE 0.4MM PITCH
Inkcazo: CARD READER 3 TRACK MANUAL SWIPE
Inkcazo: CONTACT PROBE 0.5MM PITCH
Ikhona evenkileni: 79186 pcs
Inkcazo: CONN D-SUB PLUG 25POS R/A SOLDER
Ikhona evenkileni: 11122 pcs
Inkcazo: CONN DSUB HD RCPT 15POS R/A SLDR
Ikhona evenkileni: 20883 pcs
Inkcazo: CONNECTR 32POS STRAIGHT TERM DIN
Ikhona evenkileni: 33692 pcs
Inkcazo: CONTACT PROBE PIN .5MM PITCH
Ikhona evenkileni: 37730 pcs
Inkcazo: SWITCH SNAP ACTION SPDT 11A 250V
Ikhona evenkileni: 46257 pcs
Inkcazo: SWITCH SNAP ACT SPST-NC 16A 250V
Ikhona evenkileni: 42692 pcs
Inkcazo: CONN HOOD DSUB 9POS KIT
Ikhona evenkileni: 16140 pcs
Inkcazo: CONN CABLE 4CONDCTR
Ikhona evenkileni: 2434 pcs
Inkcazo: SWITCH SNAP ACT SPST-NO 6A 250V
Ikhona evenkileni: 51695 pcs
Ikhona evenkileni: 58929 pcs
Ikhona evenkileni: 34754 pcs
Ikhona evenkileni: 18983 pcs